Ukulima kwezinkukhu | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukulima kwezinkukhu
Izinhlobo zezinkukhu zezinkukhu: izinzuzo, ukungalungi, izici
Umlimi ngamunye, onomndeni wakhe, angathola ngaphezu kwezilwane ezikhona izinkukhu ezimbalwa ezifuywayo ezifuywayo. Kunezinhlobo eziningi zezinyoni nezinkomba ezahlukene. Okwamanje ekuthuthukiseni imboni yenkukhu kunezinhlobo ezingaphezu kwekhulu zezinkukhu. Ngokuya ngokuqondiswa kwezolimo, zihlukaniswe zibe yizilwane.
Yiziphi izimbangela zokufa kwama-broilers?
Ngokuvamile izinkukhu ze-broiler zikhuliswe ezinkukhu zezinkukhu. Amahostela athola amaqanda amaqanda okuzalisa ama-broiler. Ngezinye izikhathi abanikazi bathenga izinkukhu ngokwabo, kodwa ngosuku olulandelayo bathola eyodwa noma ngaphezulu efile. Yisiphi isizathu semiphumela enjalo, sizozama ukuqonda lesi sihloko?
Izifo zezinkukhu nezindlela zokwelapha nokuvimbela kwazo
Namuhla, izinkukhu zokuzalisa ibhizinisi elizuzisa kakhulu. Kodwa, njengezo zonke izilwane ezifuywayo, izinkukhu nazo ziyakwazi ukuthola izifo ezihlukahlukene. Inkinga eyinhloko futhi ebalulekile ekuthuthukiseni izinkukhu zokulima izinkukhu. Ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi kunezifo ezithintekayo kakhulu, ngenxa yokuthi kufanele unqume yonke imfuyo.
Zagorysky Salmon Izinkukhu
Okhokho bethu babengabantu abahle ngempela lapho befundisa izinkukhu egcekeni! Kusukela egcekeni elisendlini evamile, kuzo zonke izifunda zezolimo, bazokubonisa ukuthi lokhu kuyinkampani enenzuzo kakhulu. Izinkukhu akuzona nje kuphela inyama yonke engeyona yonke inyama engeyona i-GMO etafuleni, kodwa futhi namaqanda. Uma ufuna ukuqala ukuzalisa izinkukhu, futhi awukwazi ukuthi yikuphi ukuzalwa okufanele ukhethe, khona-ke izinkukhu ze-saumon Zagorsky yilokho okudingayo.
Namuhla, izinkukhu ezizalisayo yinto ethandwa kakhulu. Ikuvumela ukuba udle njalo inyama enhle, yemvelo, inyama ehlanzekile namaqanda. Kodwa, uma sikhuluma ngokuzalisa izinkukhu Brahma, khona-ke kuzoletha nokwaneliseka kokuhleleka. Yiqiniso, lolu hlobo lwezinkukhu luyoba umhlobiso wezinyoni. Bahlale behlukaniswa umbala omuhle, ukuzola, ukulinganisela, ubuhle, ukukhuthazela.
Ukufunda ukwakha i-quail ngokwakho
Izitshalo ezikhulayo nezikhulayo ekhaya yibhizinisi elinenzuzo kakhulu. Phela, lezi zinyoni ezincane zidla ukudla okuncane kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo ziqanda kakhulu futhi zinika ngisho nenyama encane, kodwa inenani elikhulu kakhulu. Ukugcina izigwaca akuyona neze ubunzima, ngoba bangakwazi ngisho nokuhlala endlini, uma uwakha ikheji elikhethekile kubo.
Nakuba namuhla kulula ukuthola izinhlobo eziyisikhombisa nezinhlobo zezinkukhu, ezihlukaniswa umkhiqizo omuhle, kodwa izinhlobo eziyaziwayo azilahlekelwa ukuhambisana kwazo. Ikakhulukazi, enye yalezi yizinkomo zeLeggorn, eziyiminyaka eminingi ezaziwa emhlabeni wonke ngezici zazo ezinhle kakhulu.
Ukuzalwa kwezinkukhu Kuchinsky inkumbulo
Abaningi bahlanganyela ekukhuliseni izinkukhu, ngoba lokhu akuyona ibhizinisi elikhohlisayo, kodwa umphumela uyasiza kakhulu ekunciphiseni izindleko ezivela kwisabelomali siqu. Ngesikhathi esifanayo, abalimi bezinkukhu zanamuhla sebeye bafunda isifundo sokuthi ukusebenza kwaleli bhizinisi kuzoxhomeka ngokuqinile hhayi kwinani lokunakekelwa kwezinyoni nokudla, kepha ngokukhetha okulungile kokuzalwa.
Uma umlimi wezinkukhu oqala ukuzabalaza ekukhetheni izinkukhu, kufanele aqaphele ukuzalwa kohinhin, okungukuthi nje ubeka amaqanda kuphela, kodwa futhi avuselele imisipha kahle. Ama-cochinquins ayizinhlobo ezinhle kakhulu. Namuhla, kubonakala kungabonakali ezinkukhu zezinkukhu noma ekhaya.
Amaphuzu avelele wokudla kwezigwaca ezifanele
Zonke izinkukhu zezinkukhu ezinquma ukuzala izigwaca kufanele ziqaphele ukuthi into esemqoka ekuzaleni kwabo ukudla okunempilo kwezinyoni. Uma wenza konke okulungile uzothola impumelelo enkulu. Ngokuyinhloko ukwephulwa kwempilo yenyoni kuyinkinga yokudla. Kuningi ukungavumelani phakathi kwabalimi bezinkukhu mayelana nokudla kwezigwaca.
I-ventilation endlini yesikhumulo, yenzani? Yiziphi izinhlobo zokuphuza umoya ezikhona?
Wonke umuntu ucabanga ukuthi ukwakhela isakhiwo ngokwalo konke, kodwa akunjalo, kusadingeka ukuyihlomisa kahle ngemishini edingekayo. Mhlawumbe ucabanga ukuthi akukho lutho olulukhuni kulokhu, kodwa ukwakha ama-perches, izidleke, ukwenza ukukhanya nokuphuza umoya. Uma wenza konke okungalungile noma ungaphuthelwa okuthile, izinyoni zakho zingakwazi ukuyeka ukugijimela, okungekho okuhle kakhulu.
Abaphuzi kanye nabenzi bokuzikhukhumeza izinkukhu
Emashalofini azo zonke izitolo ngezikhathi ezahlukene zonyaka ungathenga imikhiqizo emisha. Ngeke kube nenkinga ukuthenga inyama yenkukhu. Kodwa nokho, abalimi ngokwabo bakhula izimila ezihlukahlukene nezilwane ezifuywayo ezindaweni zabo. Bonke bazokutshela ukuthi imikhiqizo ekhulile ekhaya i-tastier kakhulu futhi inenzuzo ngaphezu kokusitolo.
Izinkukhu ezimhlophe zaseRashiya
Esikhathini eside kusukela le hen iyingane yomuntu ekuphileni. Ukuzalwa kwezinkukhu, abamhlophe baseRussia, kungenye yezinhlobo zamaqanda ezivame kakhulu phakathi kwamazwe e-CIS Ngenxa yodumo lwakhe, ungamhlangabeza ezinkukhuleni nezinkukhu zezinkukhu, nemikhiqizo yazo ezitolo. Ababelethi iminyaka engama-20 bahola umsebenzi ekudalweni kwalolu hlobo.
Yimaphi ama-turkeys abhedu abanzi abaluhlaza?
I-turkeys e-breast-shaped-breeded-turkeys yizona ezimelele kunazo zonke ama-turkeys. Lona umehluko wabo oyinhloko kusuka kubantu. Uhlobo lwabalelwa eMelika ngokuzalana kwezimboni. Ngokushesha wathola ukuthandwa ngoba unezinzuzo eziningana ezingenakuphikwa, ngenxa yokuthi inzuzo yokuzalana kwayo iphezulu kakhulu.
Izinhlobo ezinhle zamahansi
Abantu babehlanganyela e-gusevodnost kusukela ezikhathini zasendulo, manje yiyona igatsha elihola phambili kwezolimo zanamuhla. Emhlabeni jikelele, amahansi atshalwa emapulazini angasese namapulazi amancane emakhaya, futhi okwesibini kubaluleke emva kwezinkukhu. Baziswa ngokudla okunambithekayo, isibindi sokudla (umkhiqizi ohola phambili waseFrance), phansi, inhlanzi futhi, eqinisweni, ubuhle.
Incazelo yezinhlobo ezithandwayo kakhulu zokuqondisa okunomsoco izinkukhu zesiliva ze-Adler
Phakathi kwezinhlobo eziningi ezikhona, izinhlobo zezinkukhu kanye nezinhlobo zezinkukhu, kunzima kakhulu ukukhetha ukuthi yini okufanelana nawe. Ngakho-ke, udinga ukuhamba ngegama, kodwa ngohlobo lwendlela yokukhiqiza. Emva kwakho konke, yilokho kanye okuzokwenzela khona izinyoni zakho zasekhaya. Isibonelo, isitayela esidumile kakhulu inyama-inyama, okukuvumela ukuthi uhlanganise ngokuphelele ukukhiqizwa kwamaqanda aphezulu wezinkukhu kanye nezimfanelo ezinhle kakhulu zenkukhu abakhiqizayo.
Ukuzalwa kwe-Poltava izinkukhu: sithembele ekukhiqizeni futhi kulula ukugcinwa
Ekuzalweni kwezilwane, izinhlobo ezintsha zithuthukiswa izinhlobo zezilwane ezifuywayo, ezidalwe ngobuciko ngokunqamula abameleli abavele bekhona bezinhlobo ezifanayo. Njengomthetho, lokhu kwenziwa ukwandisa umkhiqizo noma ezinye izimfanelo ezibalulekile. Uma kuzaliswa izinhlobo ezintsha zezinkukhu, indima ebaluleke kakhulu idlala yizici zabo ze-egg-laying neyamazi, okuyizona ndlela eziyinhloko zokukhetha inyoni ukuze iqhubekele phambili.
Izinkukhu Rhode Island: yiziphi izici nezinzuzo zohlobo?
Ukuzala inkukhu kunenzuzo kakhulu. Phela, ngenxa yalezi zinyoni ezisekhaya lakho zizohlala ziba amaqanda amasha nenyama ehlwabusayo, ephakeme kakhulu kunekhwalithi kulabo abathengiswa ezitolo ezinkulu. Phela, ikhaya lihlale liyisiqiniseko semvelo kanye nobungani bemvelo, abathengisi nabathengi be-PR abazama ukulingisa ngakho ukukhathazeka ezikrinini zethelevishini.
Sikhula curia Fireol ngemikhiqizo yekhwalithi
Iphupho lanoma yikuphi umlimi wezinkukhu luhlobo lwezinkukhu ezikwazi ukuthwala amaqanda ngokulinganayo kahle futhi lwaluvezwa ngumkhiqizo omuhle wenyama. Kodwa kaningi lokhu kungavamile, futhi uma le nyoni ibonisa ikhono eliphakeme lokubeka, khona-ke wonke amandla ayo asetshenziswa kulokhu, futhi ukukhula kwezicubu zesisu kuyabi futhi kuyashesha.
Sithola futhi sokhula izinhlobo zohlobo lweSussex egcekeni labo
Emakhaya, izinkukhu zaqala ukuzala ngisho nangesikhathi eside ngaphambi kokuqala kwenkathi yethu, ngakho-ke izinhlobo eziningi zinomlando omude kakhulu wemvelaphi, okungahambisani nokukhiqiza okukhiqizayo. Ngemuva kwalokho, ukuze uthole imithi eminingi nemikhiqizo yamaqanda, ngisho nabalimi bezinkukhu zasendulo bazama ukukhetha kuphela izibonelo ezinhle kakhulu bese bezisakaze kuphela.